चुरोटको धुँवाभन्दा खतरनाक धूप, निरन्तरको सुगन्धले हृदयघातको जोखिम ! | Suvadin !
चुरोटको धुँवाभन्दा खतरनाक धूप, निरन्तरको सुगन्धले हृदयघातको जोखिम !
Aug 09, 2019 06:50
एजेन्सी । हिन्दु धर्मालम्बीहरुले हरेक पटक पूजा गर्दा नछुटाउने चिज हो अग्रबत्ती अर्थात धूप । त्यसो त हिन्दु धर्मालम्बीहरुले हरेक दिन बिहन पूजा आरधना गर्छन र अनवार्यजस्तै हुन्छ, धूप । यसको सुगन्धले घरलाई शुद्ध बनाउँछ भन्ने मान्यता छ । हिन्दु धर्मालम्बीहरुमा विशेषतः धूप बालेर भगवान्लाई खुशी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पाइन्छ ।
तर, चीनमा गरिएको एक अनुसन्धानले अगरबत्तीको धुँवा चुरोटको धुँवाभन्दा पनि खतरनाक हुने बताएको छ । धूपमा हुने पोलीएरोम्याटिक हाइड्रोकार्बनले दम, क्यान्सर, टाउकोको रोग र खोकी जस्ता समस्याको कारक बन्छ ।
चिनियाँ अध्ययनको अनुसार चुरोटको तुलनामा धूपको धुँवामा धेरै रसायन बढी पाइन्छ । धूपबाट निस्कने सुगन्धित धुँवामा मसिना मसिना पार्टिकल कण हुन्छन् जुन कणहरु मानव स्वास्थ्यको लागि निकै विषालु हुन्छ ।
त्यस्तै, धुँवामा भएको खतरनाक केमिकलले डीएनए पनि बदल्न सक्छ । यसमा हुने नाइट्रोजन र सल्फर डाइअक्साइड जस्ता ग्यासले दमको समस्यासँगै सास लिन पनि असहज गराउँछ । धूपबाट निस्कने धुँवामा कार्बनमनोअक्साइले फोक्सोमा असर गर्नुका साथै ज्वरो र कपको समस्या पैदा गर्छ ।
यसैगरी, आँखा र मुटुको लागि पनि धूपको धुँवा निकै खतरनाक मानिन्छ । धूपको धुँवामा लगातार सास लिँदा हृदयघातको सम्भावना हुन्छ भने यसमा भएको हानिकारक केमिकलले आँखा चिलाउने , पोल्ने जस्ता समस्या देखापर्छ ।